မသာတစ်ခေါက် ကျောင်းဆယ်ခေါက် — Steemit
မနေ့ က သေခြင်းတရးကို မမေ့ဖို့အကြောင်းလေး ရေးပေးခဲ့ပါတယ် ။ မိမိတို့ စိတ်ထဲ တစ်မိနစ် တစ်စက္ကန့် လောက် သတိဝင်မိတာဟာလည်း မရဏာနုဿတိ ပွားများလိုက်သလိုပါပဲ ။ အလွန်ပင် အကျိုးကျေးဇူးများပါတယ် ။ မြန်မာစကားပုံတစ်ခုရှိသည် ။ " မသာတစ်ခေါက် ကျောင်းဆယ်ခေါက် " ဆိုသည့်စကားပါ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကိုတော့ သေချာသိကြသည့်သူရယ်လို့သိပ်မရှိကြပေ ။ မိမိလည်းအရင်က နားမလည်ခဲ့၍ လူကြီးသူမများမေးမြန်းခဲ့ဖူးသည် ။ " သုသာန်က မြို့အပြင်မှာဆိုတော့ မသာလိုက်ပို့ ရတာ ဝေးတယ်လေ ။ ကျောင်းက မြို့ထဲဆိုတော့ နီးတာပေါ့ကွာ ဒါကြောင့် ကျောင်းဆယ်ခေါက်သွားတာ မသာတစ်ခေါက်စာပဲ ရှိလို့မသာတစ်ခေါက် ကျောင်းဆယ်ခေါက် ခေါ်တာနေမှာပေါ့ကွ " ဆိုတဲ့ အဖြေကို အမှန်ထင်ခဲ့ဖူးသည် ။
နောက်တော့ မိမိစာသင်တိုက်ရောက် အဘိဓမ္မာတို့ဇာတ်တော်တို့ မှာ သေချာသင်ကြားရတော့ ကိုယ်ဘာသာ ဆက်စပ်တွေးမိလာခဲ့သည် ။ အရင်က အမှားသိတွေကို ဥာဏ်ရှင်းရှင်းနဲ့ အမှန်မြင်အောင် ကြည့်နိုင်ခဲ့သည် ။ ဇာတ်တော်တွေထဲမှာပါပါသည် ဝိသာခါကျောင်းအမတို့အနာထပိဏ် သူဌေးတို့ကျောင်းသို့ ခဏခဏ သွားလေ့ရှိသည် ။ သွားတိုင်းလည်း ပန်းရေချမ်းဆီမီးစတုမဓူ စသည့်လှုဖွယ်ပစ္စည်းများပါသွားကြသည် ။ နောက်ပြီး ကျောင်းထဲမှာ အမှိုက်လှဲ သောက်ရေသုံးရေ စသည့် ဝေယျာဝစ္စ ကုသိုလ်အမှုများလည်း ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြသည် ။ ထိုကဲ့သို့ကျောင်းသို့ ဆယ်ခေါက်သွားပြီး ကုသိုလ်ပြုနေခြင်းသည် အသုဘ တစ်ခါလိုက်ပို့ ပြီး " အော် ငါလည်းတစ်နေ့ သေရမှာပါလား။ သေခြင်းတရားက အကြီးအငယ်မရွေးပါလား။ ငါလည်း သေလတ္တံပါလား" ဟု မရဏာနုဿတိကမ္မဌာန်း စီးဖြန်းသည့် ကုသိုလ်နှင့် ညီမျှသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ ထို့ ကြောင့် မိမိတို့ လည်း ရနိုင်သမျှသော ကုသိုလ် ယူကြစေချင်သည် ။ မလွှဲမရှောင်သာ နာရေးပို့ ဆောင်ခဲ့ရသည်ရှိသော် ထိုကဲ့သို့ သော အခွင့်အရေးမျိုး လက်မလွှတ်သင့်ပေ။ အနည်းငယ်တော့ ဆင်ခြင်ပွားများနိုင်ကြမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည် ။
နောက်ထပ်ကုသိုလ် အလွယ်ရနည်းရှိပါသည် ။ နေ့ စဉ်နေ့ တိုင်း ရဟန်းသံဃာများအား နို့ ဃနာဆွမ်းကပ်လှုနေသည့် အကျိုးကျေးဇူးထက် လက်ဖျောက်တစ်ခါတီးစာမျှ မေတ္တာဘာဝနာ ပွားသည့် ကုသိုလ်က ပိုပြီး ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ပါသည်တဲ့။ ထို့ ကြောင့် မိမိရှေ့တွင် ဖြစ်စေ မိမိကွယ်ရာဖြစ်စေ ဒုက္ခရောက်နေသူများတွေ့လျှင် မေတ္တာဓာတ်များ ပို့ လွှတ်စေချင်သည် ။ ဤသူသည် ရေကဲ့သို့ အေးချမ်းပါစေ ။ ပန်းကဲ့သို့မွှေးကြိုင်ပါစေ။ ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများ ကျော်လွှားနိုင်ပါစေ။ စသည်ဖြင့် မိမိစိတ်ထဲကနေ စူးစူးစိုက်စိုက်ပို့ လွှတ်ပေးခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်တိုင် အေးချမ်းသော အကျိုးခံစားရမည်မှာ အသေအချာပင်။ ရပ်နီး ရပ်ဝေး မည်သူ့ ထံဖြစ်စေ စိတ်အာရုံစူးစိုက်ပို့ လွှတ်လျှင် မေတ္တာ၏ အကျိုးရရှိမှာ ဧကန်မလွဲပင် ။ ယူတတ်ရင် ကုသိုလ် ပွားတတ်ရင် ဘာဝနာဆိုသည့်အတိုင်း မိမိတို့ နောင်ဘဝအခြေလှဖို့ ရာ ကုသိုလ်အထုပ်ကလေး ရသလောက်ထုပ်ပိုးသယ်ဆောင်သွားနိုင်ကြပါစေဟု ဆန္ဒပြုလျက် . . . . .
မိမိအား ချစ်သူ မုန်းသူ သီတဂူစန်းလပမာ ချမ်းမြသာယာ ရှိနိုင်ကြပါစေ ။
myanmar esteem writing
ဦးဇင်းဘုရား တပည်တော်ဦးခိုက်ပါ၏ ဘုရား
သံဝေဂ ယူထိုက်ပါပေါ့ ဘုရား
သံဝေဂရမိပါတယ် ဦးဇင်း ငါလည်း တစ်နေ့ သေရမှာပါလား
အခုတင် မတ်မတ်စု ကုသိုလ်အများကြီးရပြီကွယ်
ကိုယ်တိုင်နှလုံးသွင်း လေ့ကျင့်သင့်တဲ့တရားတွေပါ သတိပေးနေလို့ကျေးဇူးပါဘုရား
ဟုတ်ကဲ့ ဦးစိုးရေ လူ့ ဘဝ ခဏလာလည်တုန်း ရသမျှလေး ယူသွားတတ်စေချင်မိလို့ ပါ
Congratulations @gunapeya! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
မသာတစ်ခေါက်ပို့ရင် ကျောင်းဆယ်ခေါက်ရောက်တာနဲ့တူတူဘဲထင်တယ်။သို့သော် မသာပို့သည်ဆိုတာ သံဝေဂရစေချင်လို့ပိုကြတယ်။ခုခေတ်က ထိုသို့မသိကြတော့ မသာတစ်ခေါက် ကျောင်းဆယ်ခေါက်နဲ့ညီပမလားနော်
ဒါကြောင့် သတိမမေ့ကြစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ ရေးပေးလိုက်ရတာပါ
တန်ဖိုးရှိလွန်းတဲ့ ပို့စ်လေးပါ ဘုရား
ခုခေတ်မှာတော့ ယူတက်ရင်ငရဲတွေကြီးဖြစ်နေတယ်ဘုရာ့။ အပြစ်ပြောမယ့်သူကခပ်များများဖြစ်နေတယ်။ အကူအညီပေးနိုင်သူ ကိုယ်ချင်းစာတရားမေတ္တာတရားထားနိုင်သူက ခပ်ရှားရှားဖြစ်နေတယ်။
ဟုတ်တယ် ကိုမိုးရေ ကိုယ်က အဲ့ထဲကရုန်းထွက်နိုင်ရမယ်လေ
ခဏတာလူ့ဘဝလေးမှာ လိုအပ်သော အကြောင်းရာ
ဒါပေါ့ ရုန်းကန်ရင်းမေ့နေကြမှာစိုးလို့ ပါ